Karamanoğlu Mehmetbey University iji wee guru ndi oka mmuta RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụMahadum Karamanoğlu Mehmetbey ga-akpọ ndị ọrụ agụmakwụkwọ
mahadum karamanoglu mehmetbey ga-enweta ndị ọrụ agụmakwụkwọ
Ngalaba ndị na-eso nke Rectorate nke Mahadum Karamanoğlu Mehmetbey bụ; A ga-eweghachite ndị ọrụ 2547 dị ka iwu na Usoro nke andkpụrụ Na Nyocha Banyere Nnyocha Central na Ntinye rancezọ ka etinyere na nhọpụta nke ndị otu na-abụghị ndị otu ngalaba, Iwu Elu Higher no.
Ndi ochichi nwere ike itinye aka na ngalaba nke ha na ya ma obu site na mail na mpempe akwụkwọ nke belirtilen Instructor Application mpempe akwụkwọ na akwụkwọ edepụtara n'okpuru gbasara ozi ha na-ekwu mgbe ha nyefere akwụkwọ ntanetị ha na http://servis.kmu.edu.tr/basvuru/ Na gburugburu ebe obibi, a ga-agụ akwụkwọ ndị achọrọ ma lelee ya site na nkọwa ndị dị na sistemụ ntanetị. Ndị tinyere akwụkwọ na-edobe akwụkwọ achọrọ n'ịntanetị adịghị mkpa iji nyefee akwụkwọ na mmadụ ma ọ bụ site na akwụkwọ ozi ma ha ga-edozigharị ma ọ bụ nnabata nke akwụkwọ ahụ n'aka ndị juri ma ọ bụrụ na ha ruru eru maka ule nbanye ahụ.
Startbọchị mbido akwụkwọ bụ Anbọchị ọkwa ọkwa Gazette
Mmechi Ọgwụ: 20 / 12 / 2019 Friday
-Bọchị Nnyocha-tupu: 25 / 12 / 2019 Tuesday
Ule ntinye: 27 / 12 / 2019 Friday
Ebọchị Ntụle Ikpeazụ: 31 / 12 / 2019 Tuesday
pụta www.kmu.edu.t bụ ga-ekwuputa na weebụsaịtị.
Karamanoğlu Mehmetbey Mahadum Ndị Ọzụzụ Mmụta Ọchịchị